Sentinel 2 Lobby | ThatsLuck.com
Sentinel Lobby 2 sida aad dhab ahaanba u fahamteen, waa addonkii labaad ee cajiibka ahaa ►Lobb Miner, software ugu horeysay roulette online kuu ogolaanaya inaad si ay ula socdaan waqtiga dhabta ah Ergo 20 miis roulette.
Si aad uga faa'iideysato barnaamijkan haddaba waxaa lagama maarmaan ah in aad horey u iibsatay the buuggaLobb Miner, si kastaba ha noqotee, haddii aad horeyba u haysatay faylal qoraal ah oo ay ku jiraan waxyaabo lagu keydiyo miisaska roulette, waxaad si ammaan ah u isticmaali kartaa barnaamijka sida aad doorbideyso, sidoo kale Sentinel Lobby 2 waxaa jira hawlo xiiso leh oo aan si gaar ah u khusayn xogta ay soo ururisay Lobby Miner.
Sidee Lobby Sentinel u shaqeeyaa 2
Sentinel Lobby ficil ahaan waxay isku dhejisaa faylasha qoraalka lagu duubay waqtiga dhabta ah ►Lobb Miner wuxuuna faahfaahinayaa taxane tirakoobyo la xiriira ilaa tirada tirada lambarada, xaqiiqo muhiim ah oo sidoo kale ka caawin kara ciyaaryahanka inuu xaqiijiyo jiritaanka iyo in kale dhicin ee roulette.
Wax badan ayaan horey uga qoray mowduuca eexashada, aqri booska bandhigga bot ► Roulette Bias Sniper in si fiican loo fahmo dhamaan fikradaha ay ku saleysan tahay Sentinel Lobby 2 iyo sida looga faa’iideysan karo.
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa inaad gujisaa badhanka Reload Miisaska Roulette, sidan ayaa lagu rari doonaa Sentinel Lobby 2 dhammaan faylasha miisaska kala duwan ee la xushay runtiina waxaad arki doontaa in lambarada wareegyada diiwaangashan ay sidoo kale soo muuqan doonaan (Safka wareega), halka sadarka koowaad (Khamaarka #) wuxuu u adeegi doonaa oo keliya inuu aqoonsado jadwalka leh lambar horusocod ah 01, 02, 03, iwm
Waqtigan xaadirka ah waa lagama maarmaan in la sameeyo hakad lama huraan ah si loo sharaxo nooca tirakoobka lagu falanqeynayo Sentinel Lobby 2.
Haddii aysan ahayn markii kuugu horreysay ee aad soo booqato ThatsLuck.com, waxaad u badan tahay inaad wax ka akhrisay Xaddid jilicsan boostada loogu talagalay Roulette bot ► Roulette Bias Sniper.
Hadaad runti rabto inaad wax ka aqriso mowduuca, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad aqriso (ama dib u aqriso) qoraalkaas, xilligan, oo kooban, waxaan dhihi karnaa Xaddid jilicsan waa wax kale oo aan ahayn a qiimaha noo sheegaya haddii lambarada miiska roulette ay ka soo baxayaan si ka badan sidii caadiga ahayd.
Jadwalka lagu soo daray barnaamijka wuxuu ku saleysan yahay 100 wareeg oo wareejin ah mid kasta, laga bilaabo 100 ilaa 10.000, qayb kasta waxaa lagu gartaa beeraha cad, iyadoo isla markiiba midigta laga helayo qiimaha qaraabada Xaddid jilicsan.
Tusaale ahaan 100 wareejin wareegga qiimaha Xaddidan Soft waa 28, waayo 200 wareejin waa 39 iyo wixii la mid ah.
Ficil ahaan, markii ay lambarada soo baxayaan, barnaamijku wuxuu isku daraa qiimaha togan ee dhammaan lambarrada shaqsiyeed (haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato waxa qiimaha togan ee lambarku yahay, waxaad heli doontaa wax walba oo qoran) qui), wadartaani waxay u taagan tahay Qiimaha Wanaagsan ee miiska oo dhan, kaasoo lagu soo warramey Tiirka PV.
Marka PV ee miiska oo dhan uu ka sarreeyo qiimaha Xadka Jilicsan ee wareegga wareejinta, markaa waxay ka dhigan tahay inaan ku jirno farqi "dhif ah", oo tirakoob ahaan dhaca kaliya 5% waqtiga. Sidaa darteed waxaan dhihi karnaa celcelis ahaan way ku adag tahay miiska inuu ka gudbo Xadka Jilicsan.
Waqtigan xaadirka ah 2 waxyaabo ayaa dhici kara:
► Isbeddelku si tartiib tartiib ah ayuu ugu soo noqonayaa dhanka caadiga ah (sidaa darteed qiimaha PV wuxuu ka hooseeyaa jilicsanaanta jilicsan);
► isbeddelku wuu sii kordhayaa.
Haddii, sida kiiska 2, isbeddelku sii socdo inuu kaco, annaga aan bilowno hiigsiga.
Nidaamka qalliinka sidaas darteed waa wax fudud: ka dib markii la bilaabay ►Lobb Miner aan bilowno Sentinel Lobby 2 (halkaas oo aan horeyba u qaabeynay iskuxirka miisaska kala duwan ee aan dooneyno inaan kormeerno), markan, maadaama ay qaadan karto waqti dheer kahor intaan xaalad ciyaarta la abuurin, waxaan bilaabaynaaGawaarida, oo tilmaamaya marka hore berrinka hoose intee daqiiqadood miisaska waa in la hubiyaa (Waxaan badanaa geliyaa Daqiiqo 1).
Kadibna waxaan awood u siiyaa xulashooyinka Digniinta Dhawaaqa (digniinta codka) ama Digniinta Emailka (digniinta emaylka) iyo haddii maalinta miis dhaaftay Xadka jilicsan (taas, sidaan horay u soo sheegnay, kaliya waxay ku dhacdaa 5% kiisaska), Waxaan maqli doonaa digniin la maqli karo ama aan helayo emayl.
Waqtigan xaadirka ah waxaan sidoo kale ku yareyn karaa barnaamijka bar-tilmaameedka waxaanan sii wadi karaa isticmaalka PC-ga si caadi ah, haddii wax dhacaan hubaal waan ogaan doonaa.
Isla marka alaarmiga digtoonadu kaco (miis ayaa leh soo noqnoqod aad u sarreeya oo kaliya lambarrada qaarkood), ee Tiirka PV qiimaha u dhigma miiska eex macquul ah noqda ee Casaan markanna qaybta hawlgalku way kacsan tahay, taas macnaheedu waa inaad bilaabayso sharadka!
Halkaa markay marayso, dhagsii badhanka cagaaran ee Safka FIght! miiska la tilmaamay iyo cajiibka ayaa isla markiiba furi doona ...
LAutopilot asal ahaan waa a clicker, taas oo tilmaamaysa oo keliya tirooyinka aan danaynayno, taasi waa dhammaan kuwa haysta a hal qiime wanaagsan ka weyn 8.
Waxaan doorbiday inaan ku soo koobo garoonka kaliya tirooyinkan qaar sababo sax ah: ugu horreyntii waa run in qiimaha Xaddidaadda jilicsan ay ku dhisan tahay dhammaan tirooyinka wanaagsan, sidaas darteed sidoo kale kuwa leh qiime ka hooseeya 8, laakiin ku saleysan imminka imtaxaanno fara badan, waxaan xaqiijiyey in sharad dhammaan tirooyinka togan macnaheedu waa degitaan kala duwan ee 15-18 cutubyo sharad, taas oo ficil ahaan ugu dhow u dhiganta sharadka tusaale ahaan Casaanka ama Madowga.
Marka sidaas la samaynayo, cashuurta ayaa culays badan, oo aad uga badan ciyaaryahanka, runtiina tirooyinka leh PV ka badan 8 celcelis ahaan wax ka yar 6, waa arrin u oggolaanaysa ciyaaryahanka inuu isu muujiyo wax ka yar oo ka sarreeya dhammaantood inuu xiro weerarada wanaagsan xitaa marka miiska PV uu ka hooseeyo kan Xadka Jilicsan.
Dhanka kale, fikradda waa la wada ogyahay, iyadoo la sifeynayo fursad caadi ah sida Casaanka, canshuurta ayaa ka dhigeysa wax aan macquul aheyn in lagu guuleysto ugu badnaan qiyaastii 40.000 oo wareeg ah, iyadoo laga hadlayo tirooyin hal mar ah, xitaa ka dib 200.000 oo wareejin waxaa macquul ah waxaa jira qaar (ugu badnaan 1 ama 2) wali wax fiican.
Tani waa aragti aad isku tijaabin karto naftaada adoo soo dejinaya oo isticmaalaya barnaamijka ► Roulette Bias Sniper, oo ay sidoo kale ku jiraan matoor koronto-dhaliye ah oo ku habboon kaliya nooca baaritaanka.
Marka laga reebo taas, sidoo kale maskaxda ku hay in isbeddelka guuleysta ee koox yar oo lambarro ah uu socon karo illaa afar maalmood!
Sidaa darteed ha ka welwelin haddii saacado iyo saacado aysan ka muuqan astaamaha nolosha miisaska, wax badan uma qaadaneyso isbeddellada bilaabidda qaabku oo soconaya laga bilaabo waxoogaa hits ah illaa dhowr kun oo wareejin ah.
Sida iska cad haddii isbeddelku ka sii socdo sidii caadiga ahayd, ama haddii qiimaha uu LImit jilicsan xitaa waxay gaaraysaa tan eeXaddid adag (fikradahan hore ayaa si ballaaran loo daboolay ► qui), markaa waxaa loola jeedaa inaan joogno joogitaanka a 100% roulette eex!
Xaaladdan dhifka ah ee nasiibka badan, waxaan kugula talinayaa inaad ka tagto Lobby Sentinel 2 oo isla markiiba aad ka shaqeysid bot ► Roulette Bias Sniper, Xaqiiqdii waxqabad badan oo ku saabsan hal roulette iyo xaddid badan si loo dejiyo weerar faa'iido leh.
AutoPilot waxaa loo qaabeyn karaa si la mid ah barnaamijyada kale ThatsLuck, sida ► Roulette Turbo Clicker, asal ahaan kaliya sax sax ah Spacebar Turbo Config oo jiirka ku dheji nambarada kala duwan ee ciyaarta si aad ugu duubto iskuduwaha X / Y ee u dhigma booska lambarrada shaashadda.
Isla sidaas oo kale ayaa loogu talagalay Trigger Point, halka si loo habeeyo sharadka Kala-baxa Anti waa inaan sii wadnaa gacanta.
Si aad u gasho iskuduwaha iyo lambarka midabka ee 'Trigger Point', waa inaan si fudud u doortaa ikhtiyaarka Wareeysiga Turbo Config, i dul dhig lambarka 1 markay soo muuqato (barta barta uu ku yaallo Nidaamka Midabku ku xusan yahay Baarka Pixel Info è ClWhite sida ku cad sawirka) e riix booska mar kumbuyuutarka
Haddii aad horey u aqrisay qoraalada ama aad soo dejisay ► Roulette Turbo Clicker ama ► Roulette Bias Sniper, horeyba waad u ogtahay waxa aan ka hadlayo, hadii kale ka daawo fiidyowga kanaalka YouTube taas oo muujineysa nidaamka fudud ee loo qabanayo.
Ugu dambeyntiina, shaashadda ugu dambeysa waxaan kaheleynaa xuduudaha qaabeynta ee 2 nooc oo digniin ah lagu siiyay guddiga Qolka Xakamaynta.
Midka uguhoreeya uguna fudud ayaa ah in la doorto codka aan dooneyno inaan maqalno marka alaarmiga qiimaha tS la dhaqaajiyo haddii aan howlgelinay. AutoMiner, ama markii wareegyada sharadka ee bot ay dhammaadeen.
Hadaad sii deyso Susan sida iska cad waxba ma maqli doontid xitaa haddii aad shidday qaylo-dhaanta dhawaaqa, markaa u waafaji si waafaqsan.
Hoos u sii soco waxaan heleynaa xuduudaha qaabeynta haddii aan rabno inaan helno emayl mar kasta oo qaylo dhaan kiciso (sida iska cad in la isticmaalo haddii aan dhaqaajinoAutoMiner).
Sida xuduudaha waa inaad gashaa kuwa sanduuqaaga boostada, taas oo markaa natiijada ka dhalan doonta hadday tahay dirid ahaan iyo haddi ay tahayba farriimaha digniinta ah, ama waxaad isticmaali kartaa sanduuqa boostada oo aad kaligaa ku shaqeysiisay adiga oo ah diraha.
Dhammaan xuduudaha qaabeynta qaabdhismeedka sanduuqyadan waxaa lagu keydinayaa gudaha kombuyutarkaaga feylka leh kordhinta .ini ee aad ka heshay gudaha galka barnaamijka, wax xog ah lama uruurinayo ama si kale looma gudbiyo.
Soo Degso Fayl	LSentinel2.zip - 4 MB